Ciidamo Milateri oo qarax miino lagula eegtay duleedka Muqdisho | Sagal Radio Services
Qaraxa oo ahaa miinada nooca soo boodada ayaa la dhigay wadada dhineceeda, iyadoo lala eegtay laba gaari oo Cabdi Bile ah, kuwaasoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho, kuwaasoo ka yimid dhinaca degmada Afgooye.
Saraakiil ka tirsan laamaha amaanka ayaa sheegay in qaraxa uu sababay dhaawaca Saddex askari oo ka tirsan Milatariga Soomaaliya, iyagoo meesha ka saaray inuu jiro wax dhimasho ah oo gaartay Ciidanka oo xilliga la beegsanayay si tartiib ah ku socday maadaama wadada mashquulkeeda uu badnaa.
Qof ka mid ah dadka ka agdhawaa deegaanka KM13 oo ah halka Miinada ay ka kacday ayaa sheegay in askarta saarneyd gawaarida la beegsaday ee qaraxa ka badbaaday ay rasaas dhowr jiho u fureen, lamana soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay.
Dhaawacyada Saddexda askari ayaa loo soo qaaday Isbitaalada magaalada Muqdisho, si xaaladooda Caafimaad loogula tacaalo, iyadoo meesha laga soo jiiday mid kamid ah labada gaari oo qaraxa burbur xooggan gaarsiiyay.
Saraakiisha booliska qeybtooda Miina barista ayaa howlgal Miino saaris ah ka sameeyay qeybo kamid ah wadada xiriirisa Siinka Dheer ilaa Muqdisho, halkaas oo inta badan qaraxyo lagula beegsado gawaarida ay wataan Ciidamada dowladda.